आजको आइपिएल खेलमा सन्दीप भर्सेज रशिद खान ! विश्वकै युबा उत्कृष्ट खेलाडिको भिडन्त «
आजको आइपिएल खेलमा सन्दीप भर्सेज रशिद खान ! विश्वकै युबा उत्कृष्ट खेलाडिको भिडन्त
आजको खेलमा मुख्य गरि सन्दीप र रशिद खानलाई महत्वका साथमा हेरिएको छ । विश्वकै उत्कृष्ट बलरको सुचिमा रहेका रशिद सहभागी टिमसंग खेल्नु सन्दीपलो परीक्षा पनि हो । सन्दिपले जारी सिजनमा दुई खेलबाट ३ विकेट लिएका छ्न भने समग्रमा आइपिएल भरी सन्दिपले ५ खेलबाट ८ विकेट लिईसकेका छ्न ।
सन्दीप आइपिएलको तेश्रो खेल खेल्ने भएको छ । भारतमा जारी ईन्डियन प्रिमियर लिग आईपिएलमा आज पनि एक खेल हुँदैछ । आज हुने खेलमा नेपाली समय अनुसार राति सवा ८ बजे सन्दिप लामिछाने आवद्ध दिल्ली क्यापिटल्सले सनराईजर्स हैदरावादको सामना गर्दैछ । सनराईजर्स हैदरावादबिरुद्धको खेलमा नेपालका युवा स्पिनर सन्दीप लामिछानेले समेत प्लेइंग ११ मा मौका पाएका छन् । सन्दीप आइपिएलको यो सिजनको आफ्नो तेस्रो खेल खेल्नेछन ।
समग्र आइपिएल ईतिहासमा दुबै टोलि हालसम्म १२ पटक एकआपसमा भिडेकोमा दिल्लीले ४ खेलमा मात्रै जित निकालेको छ भने हैदरावाद ८ खेलमा विजयि भएको छ ।
सन्दिप लामिछाने को हुन ?